IINDLELA EZILI-15 ZOKUKHAWULEZISA ISLOW WINDOWS 10 PC - ITHAMBILE
Iindlela ezili-15 zokuKhawulezisa iSlow Windows 10 PC
Ukuba i-PC yakho isebenza Windows 10 iyacotha okanye ihlala ishiyeka, ukwindawo elungileyo njenganamhlanje siza kuwulungisa wonke lo mbandela. Nangona Windows 10 yenye yezona nkqubo zisebenza kakuhle phaya, ekuhambeni kwexesha kuye kwacotha kwaye ngoku iPC yakho ilala kakhulu, okubi kunakho konke iba ngumkhenkce ngequbuliso. Uya kuqaphela ukuba xa ufake ikopi entsha yeWindows, inkqubo yayihamba ngokukhawuleza kakhulu xa kuthelekiswa nemeko yangoku.
Ngoku umba oshiyekileyo okanye ocothayo we-PC ngokubanzi ubangelwa yimicimbi yokusebenza phantsi Windows 10, kodwa ngamanye amaxesha inokubangelwa yimemori embi (i-RAM), idiski eyonakalisiweyo, intsholongwane okanye i-malware njlnjl. Ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha masibone ukuba kanjani Hlwayela imbewu kancinci Windows 10 PC ngoncedo lweendlela ezidweliswe ngezantsi.
Indlela yoku-1: Khubaza oopopayi kwaye uhlengahlengise ukusebenza kakuhle
Indlela yesi-2: Khubaza iiNkqubo zokuQalisa ezingafunekiyo
Indlela yesi-3: Sebenzisa i-CCleaner kunye ne-Malwarebytes
Indlela yesi-4: Sebenzisa ukucocwa kweDiski kunye nokujonga impazamo
Indlela yesi-5: Khubaza ukuqala ngokukhawuleza
Indlela 6: Hlaziya abaqhubi
Indlela yesi-7: Qhuba ukugcinwa kwenkqubo
Indlela yesi-8: Ukuqhekeka kwiHard Disk yakho
Indlela ye-9: Qhuba ukuSombulula iingxaki kwiNkqubo yoLondolozo lweNkqubo
Indlela ye-10: Khubaza iiLwandiso ezingafunekiyo (Isikhangeli seWebhu)
Indlela ye-11: Guqula ubungakanani beFayile yePhepha
Indlela ye-12: Khubaza Windows 10 Iingcebiso
Indlela ye-13: Misela iSicwangciso sakho saMandla kwiNtsebenzo ePhakamileyo
Indlela ye-14: Cima ukuKhangela kwesalathiso
Indlela ye-15: Yongeza i-RAM kunye ne-SSD
1. Cinezela iWindows Key + R emva koko uchwetheze sysdm.cpl kwaye ucofe u-Enter ukuvula iiPropathi zeNkqubo.
2. Tshintshela ku Ithebhu ephezulu emva koko ucofe ku Useto ngaphantsi Ukusebenza.
3. Phantsi kweempawu ezibonakalayo zokujonga Lungisa ukusebenza kakuhle ngokuzenzekelayo khubaza yonke imifanekiso eshukumayo.
4. Cofa Faka, kulandele OK.
5. Qalisa kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho kwaye ubone ukuba uyakwazi na Khawulezisa iSlow Windows 10 PC.
1. Cinezela Ctrl + Shift + Esc amaqhosha ngokudibeneyo ukuvula uMphathi weMisebenzi emva koko utshintshele ku Ukuqala eqala.
Ukusuka kuluhlu, khetha iinkqubo ongazisebenzisiyo emva koko ucofe u Khubaza iqhosha.
3. Yenza oku kwinkqubo nganye engeyomfuneko, kuba uya kuba nakho ukukhubaza inkqubo enye ngexesha.
4.Vala uMphathi weSebenzi kwaye uqalise kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho.
1. Khuphela uze ufake CCleaner & IiMalwarebyte.
2. Sebenzisa iiMalwarebyte kwaye mayijonge inkqubo yakho kwiifayile ezinobungozi. Ukuba i-malware ifunyenwe, iya kuzisusa ngokuzenzekelayo.
3. Ngoku sebenzisa CCleaner kwaye ukhethe Ukucoceka ngokwesiko .
4. Phantsi koCoco oluCwangcisiweyo, khetha i Ithebhu yeWindows kwaye ujonge uphawu lokungagqibeki kwaye ucofe Hlahlela .
5. Xa uhlalutyo lugqityiwe, qiniseka ukuba uya kususa iifayile eziza kucinywa.
6. Okokugqibela, cofa apha Qhuba isicoci iqhosha kwaye vumela i-CCleaner iqhube ikhosi.
Ukuqhubeka nokucoca inkqubo yakho, khetha ithebhu yeRegistry , kwaye uqinisekise ukuba oku kulandelayo kuyakhangelwa:
indlela yokulungisa isignali ye-wifi ebuthathaka kwi-laptop ye-hp
8. Cofa apha Skena imiba iqhosha kwaye vumela i-CCleaner ukuba iskene, emva koko ucofe kwi Lungisa imiba ekhethiweyo iqhosha.
9. Xa uCCleaner ebuza Ngaba ufuna utshintsho kwisipele? khetha Ewe .
10. Nje ukuba ugcino lwakho lugqityiwe, cofa kwi Lungisa yonke imiba ekhethiweyo iqhosha.
11. Qala kabusha iPC yakho ukugcina utshintsho.
1. Yiya kule PC okanye kwi-PC yam kwaye ucofe ekunene ku-C: ukuqhuba ukukhetha Iipropati.
2. Ngoku ukusukela Iipropati window, cofa apha Ukucoca iDisk phantsi komthamo.
3. Kuya kuthatha ixesha ukubala indawo engakanani ukucocwa kweDiski eya kukhululeka.
4. Ngoku cofa Coca iifayile zenkqubo emazantsi phantsi kweNkcazo.
5. Kwiwindow elandelayo, qiniseka ukukhetha yonke into engezantsi Iifayile zokucima kwaye ucofe u-Kulungile ukuqhuba ukucoca iDisk. Phawula: Sijonge Ukufakwa (ii) kwangaphambili kweWindows kwaye Iifayile zokuFakelwa yeWindows okwethutyana ukuba ziyafumaneka, qiniseka ukuba ziyajongwa.
6. Lindela ukucocwa kweDisk ukugqibezela kwaye ubone ukuba unako Khawulezisa iSlow Windows 10 PC, ukuba akunjalo qhubeka.
7. Vula Umyalelo oboqayo . Umsebenzisi unokwenza eli nyathelo ngokukhangela ‘Cmd’ kwaye ucinezela u-Enter.
8. Kwiwindows cmd chwetheza lo myalelo ulandelayo kwaye ucofe u-Enter:
Phawula: Kulo myalelo ungasentla C: yidrive apho sifuna ukujonga khona idiski, / f imele iflegi ethi ichkdsk imvume yokulungisa naziphi na iimpazamo ezinxulumene nedrive, / r vumela i-chkdsk ikhangele amacandelo amabi kwaye iphinde ibuye kunye / x iyalela idiski yokukhangela ukuba yehle idrive ngaphambi kokuqala kwenkqubo.
9. Iya kucela ukucwangcisa ukuskena kwinkqubo elandelayo yokuqalisa kwakhona, uhlobo Y kwaye ucofe ukungena.
Nceda ugcine engqondweni ukuba inkqubo ye-CHKDSK ingathatha ixesha elininzi njengoko kufuneka yenze imisebenzi emininzi yenqanaba lenkqubo, ke yiba nomonde ngelixa ilungisa iimpazamo zenkqubo kwaye nje ukuba inkqubo igqityiwe iya kukubonisa iziphumo.
1. Cinezela iWindows Key + R emva koko chwetheza ulawulo kwaye ucofe u-Enter ukuvula Iphaneli yokulawula.
2. Cofa apha I-Hardware kunye nesandi emva koko ucofe ku Ukhetho lwaMandla .
3. Emva koko kwisahlulo sefestile sasekhohlo khetha Khetha okwenziwa ngamaqhosha amandla.
4. Ngoku nqakraza kwi Shintsha iisetingi ezingafumanekiyo ngoku.
5. Sukukhangela Vula ukuqala ngokukhawuleza kwaye ucofe ku Gcina utshintsho.
6. Qalisa kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho kwaye ubone ukuba uyakwazi na Khawulezisa iSlow Windows 10 PC.
1. Cinezela iWindows Key + R emva koko uchwetheze yitshise.msc kwaye ucofe u-Enter ukuvula uMphathi weDivayisi.
2. Okulandelayo, qiniseka ukuba cofa ekunene kuso nasiphi na isixhobo esinophawu lwesikhuzo esimthubi ecaleni kwaso.
3. Khetha Uhlaziyo loMqhubi kwaye ucofe ku Khangela ngokuzenzekelayo isoftware yomqhubi ehlaziyiweyo.
4. Emva kohlaziyo, qala kabusha iPC yakho kwaye ubone ukuba uyakwazi ukulungisa umba.
5. Ukuba akunjalo, emva koko ucofe ekunene kwaye ukhethe Uhlaziyo loMqhubi.
6. Ngeli xesha, khetha Bhrawuza ikhompyuter yam ngesoftware yomqhubi.
7. Emva koko ucofe ku Makhe ndikhethe uluhlu lwabaqhubi abakhona kwikhompyuter yam.
8. Khetha umqhubi ofanelekileyo kuluhlu kwaye ucofe u-Okulandelayo.
Phawula: Kuyacetyiswa ukuba uzame le nkqubo ingentla ngomqhubi wesixhobo ngasinye kuluhlu.
9. Qalisa kwakhona iPC yakho kwaye ubone ukuba unako Khawulezisa iSlow Windows 10 PC.
1. Khangela i iphaneli yokulawula ukusuka kwi-Start Menu yokukhangela ibha kwaye ucofe kuyo ukuvula iPhaneli yokuLawula.
2. Ngoku nqakraza kwi Inkqubo kunye noKhuseleko.
3. Okulandelayo, cofa apha Ukhuseleko kunye nokugcinwa.
4. Yandisa uLondolozo kwaye phantsi koLungiso oluzenzekelayo ucofe ku Qalisa ukugcinwa .
5. Vumela i-System Maintenace ibaleke kwaye ibone ukuba uyakwazi na Khawulezisa iSlow Windows 10 PC , ukuba akunjalo qhubeka.
1. Chwetheza Ukuchasana kwibhokisi yokukhangela yeWindows emva koko ucofe ku Ukuzikhusela kunye nokuSebenzisa iiDrive.
2. Khetha ifayile ye ukuqhuba nganye nganye kwaye ucofe Hlahlela.
3. Ngokufanayo, kuzo zonke iidrives ezidwelisiweyo cofa Yandisa.
Phawula: Musa ukukhusela iDrayivu ye-SSD njengoko inokunciphisa ubomi bayo.
4. Qalisa kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho kwaye ubone ukuba uyakwazi na Khawulezisa iSlow Windows 10 PC , ukuba akunjalo qhubeka.
2. Khangela iingxaki uze ucofe ku Ukulungisa ingxaki.
3. Emva koko, cofa ujonge konke kwisahlulo sasekhohlo.
4. Cofa uze usebenze Ukujongana neengxaki kuLondolozo lweNkqubo .
5. Isicombululi-ngxaki sinokukwazi ukukhawulezisa iSlow Windows 10 PC.
Izandiso luphawu olusebenzayo kwi-chrome ukwandisa ukusebenza kwayo, kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba olu lwandiso luthatha izixhobo zenkqubo ngelixa ziqhuba ngasemva. Ngamafutshane, nangona ulwandiso oluthile lungasetyenziswanga, luya kusetyenziswa izixhobo zakho zenkqubo. Ke ngumbono olungileyo ukususa lonke ulwandiso olungafunekiyo / i-junk onokuthi ulubeke ngaphambili.
1. Vula iGoogle Chrome emva koko uchwetheze chrome: // ulwandiso kwidilesi kwaye ucofe u-Enter.
2. Ngoku khubaza kuqala zonke izandiso ezingafunekiyo uze uzicime ngokunqakraza kwi icon yokucima.
3. Qala kabusha i-Chrome kwaye ubone ukuba olu ncedo lokwenza iPC yakho ikhawuleze na.
1. Chwetheza ukusebenza kwibhokisi yoPhendlo lweWindows kwaye ucofe ku Lungisa ukubonakala nokusebenza kweWindows.
2. Tshintshela kwithebhu ePhambili kwaye ucofe u Guqula iqhosha ngezantsi Imemori eyiyo.
3. Sukukhangela Lawula ngokuzenzekelayo ubungakanani befayile yokupakisha kubo bonke abaqhubi .
4. Phawula idrive Windows 10 efakwe kuyo kwaye ukhethe ifayile ye- Ubukhulu Custom.
5. Cwangcisa Amaxabiso acetyiswayo ngamabala: Ubungakanani bokuqala (MB) kunye nobukhulu obukhulu (MB).
6. Cofa u-OK, emva koko ucofe u-Faka ulandelwe ngu-OK
7. Qala kabusha iPC yakho kwaye ubone ukuba uyakwazi Khawulezisa iSlow Windows 10 PC.
1. Cinezela iWindows Key + mna ukuvula iiSetingi emva koko ucofe Inkqubo.
2. Ukusuka kwimenyu yasekhohlo, khetha Izaziso kunye nezenzo.
3. Cima ukutshintsha kwe Fumana iingcebiso, amaqhinga kunye neengcebiso njengoko usebenzisa iWindows s.
4. Qala kabusha iPC yakho.
1. Cofa ekunene I icon yamandla emva koko ukhethe Ukhetho lwaMandla.
2. Cofa apha Bonisa izicwangciso zokongeza kwaye ukhethe Ukwenza okuphezulu.
3. Vala useto kwaye uyiqale kabusha iPC yakho.
1. Chwetheza Isalathiso kukhangelo lweWindows emva koko ucofe iqhosha Izinketho zesalathiso.
2. Cofa apha Guqula kancinane kwaye ucofe ku Bonisa zonke iindawo.
umqhubi wudfrd akaphumelelanga ukulayisha
3. Qiniseka ukuba sukukhangela zonke iidiski zakho kwaye ucofe KULUNGILE.
4. Emva koko ucofe u-Vala kwaye uqalise kwakhona iPC yakho. Kwakhona, jonga ukuba uyakwazi na Khawulezisa iSlow Windows 10 PC , ukuba akunjalo qhubeka.
Ukuba iPC yakho iqhubeka ngokucotha kwaye uzame zonke ezinye iindlela, unokufuna ukuqaphela ukongeza i-RAM. Nceda ususe i-RAM endala kwaye emva koko ufake i-RAM entsha yokwandisa ukusebenza kwenkqubo yakho.
Kodwa ukuba ujongene nokushiyeka ngamanye amaxesha okanye inkqubo ikhenkceze, unokucinga nangokongeza i-SSD yangaphandle ukukhawulezisa iPC yakho.
Lungisa Impazamo yokuFakwa kweWindows yeWindows
Susa izixhobo zoLawulo kwi Windows 10
Ukulungiswa komfanekiso we-boot okhethiweyo akuqinisekisanga mpazamo
Hlela i icon yevolumu elahlekileyo kwiTaskbar ngaphakathi Windows 10
Yiloo nto uphumelele Imbewu inyuse iSlow Windows 10 PC kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sithuba ke uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
Kutheni le nto iiwindows 10 ziqhubeka nokuhlaziya
intanethi ayisebenzi emva kohlaziyo lweWindows
khubaza iphedi yokuchukumisa windows 10 xa imouse ixhunyiwe
windows yeka ikhowudi irql engekho ngaphantsi okanye elinganayo
Uhlaziyo lweWindows 10 lusilele
Isikrini esiblowu hayi kancinci okanye esilinganayo